राप्रपाका सात संगठनका पदाधिकारी समायोजन, को-को बने प्रमुख ?
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १३:२९
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विभिन्‍न सात संगठनका पदाधिकारी समायोजन गरेका छन् । राप्रपाका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको बिहीबार बसेको बैठकले सो पार्टीसँग आवद्ध सात संगठनका पदाधिकारीको समायोजन गरेका हुन् ।
जसअनुसार पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनमा अध्यक्ष कुन्तीकुमारी शाही र सहअध्यक्षमा ममता राईलाई चयन गरिएको छ । उनीहरुले पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठनमा अध्यक्षद्वय प्रकाश रिमाल र राजु लोहनी चयन गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक बिद्यार्थी संगठनमा कार्यकारी अध्यक्ष महेशबहादुर सिंह र अध्यक्ष धनशुर शाहीलाई चयन गरिएको राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले जनाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उत्पीडित उत्थान संगठनमा ऋषिबाबु परियारलाई अध्यक्ष र सरला बिश्वकर्मालाई सहअध्यक्ष बनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनको अध्यक्षमा ध्रुव रायमाझी (उदयपुर) र सहअध्यक्षमा राममणि न्यौपाने चयन भएका छन् । राप्रपाले ०७८ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ ।